Inqubo yokucabangela yokushisa
Ngo-2002, i-American Medicines and Food Administration yavuma uhlelo lweThermage. Njengamanje, le divayisi isetshenziselwa imitholampilo yezithokozi emhlabeni jikelele. Inqubo yezithokozi zokushisa yayitholakale yilabo abambalwa, njengoba kwakudingeka ukuba uye eSwitzerland, kodwa namuhla kunelungelo lokuvakashela iSoir Medical Centre.
I-thermage - inqubo engakaze ithole okufanayo, futhi kuphela le nqubo kusukela ekusebenziseni kokuqala ikuvumela ukuba ufeze umphumela oyifunayo. Ngenxa yale nqubo, isikhumba esidala singabuye sithole ukuqina. Ngenxa yomphumela wemisebe yomsakazo womsakazo, okuvame ukuba ngu-6 MHz nomphumela wokuphakamisa uphumelela. Futhi ngenxa yalokho - izinga lokushisa kwesikhumba (kuze kube yizilimitha ezingu-5) landa futhi ama-collagen amafayibanda esikhumba, okwenza kube lula, abe nezwi, ngakho-ke izintambo ezintsha ziqala ukwakha. Ukushiya inqubo, ngokushesha uzizwa ukuthi isikhumba siqinile, nakuba izintambo ezintsha emva kokusetshenziswa kokukhula okufudumele iminyaka eminingana. Yingakho, ngokuhamba kwesikhathi, umphumela ubonakala ngokwengeziwe.
Ngosizo lwalolu lwazi, kungenzeka ukulungisa ukukhubazeka okuhlukahlukene okuzithokozisa okungatholakala kuphi: imiphumela yokubeletha, ukuguqulwa kweminyaka (kuthinta isikhumba), ukutakula kusuka ku-liposuction, imiphumela ngemuva kokulahlekelwa kwesisindo esibucayi.
Le nqubo yokwenza izimonyo yenziwa ngosizo lwezinto eziyingqayizivele zeThermaCool besebenzisa i-spray cool spray, ngenxa yokuthi izingxenye ezingaphezulu zesikhumba zigcinwa. I-armaTip ekhemisi ekhethekile, enezinhlobo ezingamashumi amabili zokwelashwa, ilawula ukushisa kwesikhumba, futhi ilawula ukuqina, indawo nokujula okuthintekayo. Isibhamu sivumela isiguli ngasinye ukuba sikhethe amaqhinga ahlukene. Le nqubo ingathatha amahora ambalwa, konke kuxhomeke endaweni yokuchayeka.
Inqubo yokushisa ilula futhi iphephile: isikhumba siphathwa ngemisebe ngosizo lombhobho, futhi isiguli ngalesi sikhathi sizwa ukuthinta okushisayo nokubandayo kaningi.
Ungakhohlwa isikhathi sokuvuselela emva kwenqubo, njengoba umphumela uzobonakala ngokushesha, futhi lokhu ngaphandle kwemiphumela emibi ehlukahlukene.
Ukusetshenziswa kwendlela yokushisa.
Ngokuphumelelayo ususe imibimbi kanye nemibimbi evela ezindaweni ezilandelayo:
decollete, ubuso, entanyeni;
ijwabu leso eliphansi nelenhla;
izibikezelo, amahlombe, izandla;
Inqubo yokushisa isetshenziselwa ezinye izinhloso, isibonelo:
Ishiya liphakamisa ngaphandle kokuhlinzwa;
ukulungiswa kwe-oval face;
ukuqedwa kwamafutha amaningi;
ukuphakamisa izicubu ezidlulele noma ezixekethile kunoma iyiphi ingxenye yomzimba ngaphandle kokungenelela kokuhlinzwa;
Ukuqhathaniswa kwindlela yokushisa.
isetshenziswe ngokuzenzakalelayo i-defibrillator / i-cardioverter;
noma iyiphi idivayisi esebenzayo kagesi;
isifo sikashukela, izifo ezithathelwanayo ezivamile, izifo ezixhumene nezicubu (scleroderma, i-systemic lupus erythematosus), izilonda zesikhumba, ikakhulukazi uma le ndawo ingakwazi ukwelashwa.
Izinyathelo zenqubo ziyashisa.
Ukushisa kwenziwa ngaphandle kokulungiselela okukhethekile. Okudingeka ngempela kwenziwe ngaphambi kokuba inqubo isuse zonke izesekeli zensimbi, imihlobiso.
Oxhumana naye emuva uqondiswe emzimbeni wesiguli.
Indawo ephathwayo yomzimba ihlanjululwa kahle futhi ifinyelelwe.
Indawo esetshenzisiwe imakwe ngephepha leThermaCool.
Imingcele enhle kunazo zonke ikhethiwe, uhlelo lonke oludingekayo lulungiswa.
I-gel yokuxhumana ekhethekile isetshenziswa endaweni ephathwayo futhi inqubo ngokwayo iqala.
Umsebenzi wenziwa, kokubili ukuvuselelwa okujwayelekile komzimba, nezindawo ezingaphezu kwezinkinga.
I-gel yokuxhumana ekhethekile isusiwe futhi isisindo sisusiwe.
I-serum ethobisa evela eSwitzerland isetshenziswa endaweni ephathwayo.
Ngemuva kwezinqubo zamahora angu-24, ukutholakala okushisa ngokweqile nokuzikhandla ngokweqile kufanele kugwenywe.
Ukuhambisana nenqubo yokushisa
Ngokuphakama okujulile kwindlela yokushisa, lezi zinqubo ezilandelayo zithandwa kakhulu:
I-Biorevitalization nge-IAL-SYSTEM, kanye nokwelashwa okujulile okubuyisela kabusha kwe-derma ne-Collost 7%;
I-phototherapy esetshenziselwa ukulungisa izinkanyezi "izinkanyezi" namabala okugqoka, kanye nokwelashwa kwe-laser;
I-plastic contour ne-hyaluronic acid, kanye nokuphathwa kwe-toxic A (Dysport noma i-Botox) emphunzini, ebunzini nasweni.
Inqubo yokushisa iboniswa njenge-fixer yomphumela, futhi njengendlela yokwelapha yesondlo ngemuva kokuhlinzwa kwepulasitiki, ikakhulukazi kulawo macala uma ukungenelela kuphela okuhlinzekwa ukuxazulula inkinga.
Hlola zonke izinzuzo nezingozi bese unquma ukuthi kuwufanele yini ukuphakamisa ngokujulile inqubo yokushisa uma:
Unomgomo wokulungisa isakhiwo se-anatomical yomzimba nobuso. Inqubo yokushisa ayikwazi ukuguqula kakhulu, njengoba inqubo yokuvuselela;
Umgomo wakho ukuthola ukufinyelela okunamandla okuqhubekayo okuqhubekayo: ngemuva kokushisa, umphumela ofanayo uzovela ezinyangeni eziyisithupha kamuva;
Udinga ukulungiswa kwezindawo zokuguqula umzimba kanye nokukhishwa kwe-hypopigmentation nokususwa kwe-vasculature.
Kulezi zimo, noma yiluphi uchwepheshe uzonikeza izincomo ekusetshenzisweni kwe-phototherapy, peeling, mesotherapy, amapulasitiki angaphakathi, ukuhlinzwa kwe-laser, ukuhlinzwa kweplastiki, kanye nezinye izindlela zokulungisa. Phakathi kwazo zonke ezinye izindlela ongakhetha kuzo.
Ukuhlinzeka ngezinzwa zokuhlinza epulasitiki
"Imicibisholo yaseMpumalanga" - ukuthambekela kobuhle ekwindla
Njengoba kunjalo, kusukela othobekile kakhulu waba ibhomu lesibhedlela sexunu
Ingane yami yayinesizungu kakhulu, ingenasiphelo
126 Izinyathelo Ezilula Zokuba Ngcono
Ukubeletha emanzini: izinzuzo, ukungalungi
Izenzo ezilula zokulahlekelwa kwesisindo esisheshayo
Izinwele ezinzima: izimbangela nezindlela zokupheka ekhaya ukuze unciphise ama-curls
Sandwich ngezinyosi, amakhowe kanye noshizi waseSwitzerland